ရိုးရှင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း ၇ ခုကို လိုက်နာရုံနဲ့ သင့်အလေးချိန်ကို ကျစေမည် | Buzzy
ရိုးရှင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း ၇ ခုကို လိုက်နာရုံနဲ့ သင့်အလေးချိန်ကို ကျစေမည်
လက်ရှိလူနေမှု ပုံစံကနေ မသိမသာလေး ပြင်ရုံနဲ့ အလေးချိန် ကျစေမယ့် နည်းတွေပါ
အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင် နာရီဝက်ဟာ လုံလောက်ပါတယ်
ကောင်းသတင်းကတော့ ဒိန်းမက်နိုင်ငံ ကိုပင်ဟေဂင် တက္ကသိုလ်ရဲ. သုတေသန ပြုမှုအရ နေ့စဉ် နာရီဝက်လောက် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ တစ်နာရီအပြည့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုပြီးသိသာစွာ အလေးချိန် ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်တဲ့
ကောငျးသတငျးကတော့ ဒိနျးမကျနိုငျငံ ကိုပငျဟဂေငျ တက်ကသိုလျရဲ. သုတသေန ပွုမှုအရ နစေ့ဉျ နာရီဝကျလောကျ လကေ့ငျြ့ခနျး ပွုလုပျပေးခွငျးဟာ တဈနာရီအပွညျ့ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျခွငျးထကျ ၂၅ ရာခိုငျနှုနျး ပိုပွီးသိသာစှာ အလေးခြိနျ ကဆြငျးစနေိုငျပါတယျတဲ့
ဖြည်းညှင်းစွာ ဝါးစားပြီး အစားကို ကြေညက်ပါစေ
အစားကို အလျှင်အမြန် စားခြင်းဟာ မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့် ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ ။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး အစားကို အလျှင်အမြန်စားခြင်းဟာ သင့်ကို လိုအပ်တာထက် အစားကို ပိုစားမိပါသေးတယ်။ အစားကို အမြန်စားခြင်းကြောင့် သင့်ဦးနှောက်က သင့် အစာအိမ်ပြည့်ပြီလို့ သတ်မှတ်ချိန်မှာ သင်က ခန္တာကိုယ်က လိုအပ်တာထက် ပိုစားမိပြီးသား ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။
အစားကို အလြှငျအမွနျ စားခွငျးဟာ မကောငျးတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ ဆိုတာ လူတိုငျးသိကွမှာပါ ။ ဒါတငျပဲလားဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး အစားကို အလြှငျအမွနျစားခွငျးဟာ သငျ့ကို လိုအပျတာထကျ အစားကို ပိုစားမိပါသေးတယျ။ အစားကို အမွနျစားခွငျးကွောငျ့ သငျ့ဦးနှောကျက သငျ့ အစာအိမျပွညျ့ပွီလို့ သတျမှတျခြိနျမှာ သငျက ခန်တာကိုယျက လိုအပျတာထကျ ပိုစားမိပွီးသား ဖွဈနတေကျပါတယျ။
ကွန်ပျူတာ ၊ တီဗီတို့ရှေ.မှာ အစာစားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ
အမေရိကန် ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ. အဆိုအရ တီဗီကလာတဲ့ အစားအစာ ကြေငြာတွေဟာ သင့်ကို အစားစားချင်စိတ်နဲ့ အလွန်အကျွံစားမိခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်က တီဗီ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာ ရှေ.မှာ အစားစားခြင်းဖြင့် သင့်အစားအစာအပေါ် အလေးမထားမိပဲ သင်ဘယ်လောက် စားလိုက်မိတယ်ဆိုတာကို သတိမူမိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အမရေိကနျ ဂြာနယျတဈစောငျရဲ. အဆိုအရ တီဗီကလာတဲ့ အစားအစာ ကွငွောတှဟော သငျ့ကို အစားစားခငျြစိတျနဲ့ အလှနျအကြှံစားမိခွငျးကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သငျက တီဗီ ဒါမှမဟုတျ ကှနျပြူတာ ရှေ.မှာ အစားစားခွငျးဖွငျ့ သငျ့အစားအစာအပျေါ အလေးမထားမိပဲ သငျဘယျလောကျ စားလိုကျမိတယျဆိုတာကို သတိမူမိမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။
အစားအစာ အညွှန်းတွေကို သေချာဖတ်ပါ
သင့်အနေနဲ့ အစားအစာတွေရဲ. အကြောင်း အညွှန်းတွေကို သိထားသင့်ပါတယ် ။ ဒါမှ သင့်ဟာ ကျန်းမာတဲ့အစားအစာ နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေမယ့် အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်သိရှိနိုင်မှာပါ ။
သငျ့အနနေဲ့ အစားအစာတှရေဲ. အကွောငျး အညှနျးတှကေို သိထားသငျ့ပါတယျ ။ ဒါမှ သငျ့ဟာ ကနျြးမာတဲ့အစားအစာ နဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျတိုးစမေယျ့ အစားအစာတှကေို ရှေးခယျြသိရှိနိုငျမှာပါ ။
ဒိန်ချဉ်နဲ့ အခွံမာသီးကို ပိုမိုစားသုံးပါ
လေ့လာမှုတွေအရ ဒိန်ချဉ်နဲ့ အခွံမာသီးတွေကို စားသုံးခြင်းဟာ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စားသုံးခြင်းထက် ခန္တာကိုယ် အလေးချိန်ကျစေဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
လလေ့ာမှုတှအေရ ဒိနျခဉျြနဲ့ အခှံမာသီးတှကေို စားသုံးခွငျးဟာ သဈသီးနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ စားသုံးခွငျးထကျ ခန်တာကိုယျ အလေးခြိနျကစြဖေို့ အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။
အပူအစပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ သင့်ရဲ. ခန္တာဗေဒကို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပူအစပ်ကို သင့်တင့်မျှတစွာ စားပေးသင့်ပါတယ်။
အပူအစပျနဲ့ ဆိုငျတဲ့ အစားအသောကျတှဟော သငျ့ရဲ. ခန်တာဗဒေကို ကောငျးမှနျအောငျ ပွုလုပျပေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အပူအစပျကို သငျ့တငျ့မြှတစှာ စားပေးသငျ့ပါတယျ။
ရေသောက်ခြင်းဟာလည်း သင့်ရဲ. ခန္တာဗေဒကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အစားအစာခင် ရေနှစ်ဖန်ခွက် သောက်သုံးခြင်းဟာ ခန္တာကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပေပါတယ်တဲ့
ရသေောကျခွငျးဟာလညျး သငျ့ရဲ. ခန်တာဗဒေကို အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ အစားအစာခငျ ရနှေဈဖနျခှကျ သောကျသုံးခွငျးဟာ ခန်တာကိုယျအလေးခြိနျကဖြို့ အထောကျအကူ ဖွဈပပေါတယျတဲ့